အလွမ်း​ပြေ စကား​တောင်​ မ​ပြောလိုက်​ရဘူး -၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အလွမ်း​ပြေ စကား​တောင်​ မ​ပြောလိုက်​ရဘူး -၂
အလွမ်း​ပြေ စကား​တောင်​ မ​ပြောလိုက်​ရဘူး -၂
Posted by naywoon ni on Mar 6, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary, Myanma News | 8 comments
အလွမ်း​ပြေစကား​တောင်​ မ​ပြောလိုက်​ရဘူး – ၂
တစ်​ရက်​ ကိုထွန်းအံ့ တို့နဲ့ ပြန်​ဆုံဖြစ်​တာက မထင်​မှတ်​တဲ့ ​နေရာမှာပါ ။ ​နေ၀န်းနီ သူငယ်​ချင်း ​မောင်​ချက်​ကြီးက ဒီဆိုင်​မှာ ငါးကင်​​ကောင်းတယ်​ဆိုပြီး အသစ်​ဖွင့်​ထားတဲ့ ဘီယာဆိုင်​တစ်​ဆိုင်​မှာပါ ။ ကိုထွန်းအံ့ နဲ့ အတူ ပါလာတာက လူသာမြင်​ဖူးပြီး လုံးဝ မရင်းနှီးတဲ့ လူ တစ်​ဦးနဲ့ ကိုထွန်းအံ့ ရဲ့ သားနဲ့ သမီး တို့ပါ ။ ​နေ၀န်းနီ တို့က အ၀င်​ သူတို့က အထွက်​ဖြစ်​​နေတာ​ကြောင့်​ စကား သိပ်​မ​ပြောဖြစ်​လိုက်​ဘူး ။ သူ့သမီးက ငါးကင်​စားချင်​တယ်​ဆိုလို့ လိုက်​​ကျွေးရတယ်​​ပြောပါတယ်​ ။ သာ​ကြောင်းမာ​ကြောင်း​ပြောပြီး ​နောက်​တစ်​ရက်​ဆုံဖို့ ချိန်းလိုက်​ပါတယ်​ ။ သူတို့ ကြည့်​ရတာ အရင်​လို နွမ်းဖတ်​ဖတ်​ မဟုတ်​​တော့ပဲ အ​တော်​အသင့်​ ​ပြေလည်​​နေပုံ ရပါတယ်​ ။ အ​တော်​အသင့်​ ဆိုတာထက်​ကို ​ပြေလည်​​နေပုံရပါတယ်​ ။ ခုပဲ ကြည့်​​လေ သမီးက ဘီယာဆိုင်​မှာ ​ရောင်းတဲ့ ငါးကင်​ စားချင်​တာ လိုက်​​ကျွေးတယ်​ဆို​တော့ ။ ဒါနဲ့ ​နေ၀န်းနီလည်း ဒကာ​တော်​ ​မောင်​ချက်​ကြီး ​နေရာယူထားတဲ့ စားပွဲမှာ ထိုင်​လိုက်​ပြီး မှာထားတဲ့ စည်​ဘီယာ တစ်​ငုံ စုတ်​ယူလိုပြီး ​မောင်​ချက်​ကြီးကို
” ဟို ကိုထွန်းအံ့ ဆိုတဲ့ လူကြီး​တော့ စီးပွား​ရေး အဆင်​​ပြေ​နေပုံပဲကွ ​မောင်​ချက်​ကြီးရ ”
” ခင်​ဗျားက ​လေ့လာပါ မှတ်​သားပါ ဆို​တော့ ​ဘောလုံးပွဲ ဘယ်​အသင်​နဲ့ ဘယ်​အသင်း လိုက်​မှတ်​​နေတာကိုး ။ ဖတ်​ပါမှတ်​ပါ ဆို​တော့ လည်း ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​​လောက်​နဲ့ အချိန်​ကုန်​​နေ ကိုယ့်​ပတ်​၀န်းကျင်​မှာ ဘာ​တွေ ဖြစ်​​နေလဲ ခင်​ဗျား မသိလိုက်​ဖူး မဟုတ်​လား ”
​မောက်​ချက်​ကြီးက ထုံးစံ အတိုင်း စကားနာထိုးပါတယ်​ ။ ပြီးမှ
” ခင်​ဗျားသိချင်​ရင်​ ကျုပ်​​ပြောပြမယ်​ နား​ထောင်​ ။ ခုကျုပ်​​ပြောပြတာ​တွေက ကျုပ်​ကြားတာ​တွေပြန်​​ပြောပြတာ​နော်​ ။ ဘယ်​​လောက်​မှန်​တယ်​ ဆိုတာ ကျုပ်​တာဝန်​မယူနိုင်​ဘူး ”
​ပြောမဲ့သူက ​ပြောမဲ့ အ​ရေး ​ဈေးကိုင်​​နေ​သေးတယ်​ ။ အဲ့ဒါနဲ့
” ​ပြောမှာသာ ​ပြောစမ်းပါကွာ ​မောင်​ချက်​ကြီးရ မင်းကလည်း ​ဈေးကိုင်​လိုက်​တာလွန်​​ရော ”
​မောင်​ချက်​ကြီးက သူ့ခွက်​ထဲက ဘီယာ တစ်​စုပ်​ စုပ်​လိုက်​ရင်းက
” ဒီလိုဗျ ​စော​စောက လူကြီး နှစ်​​ယောက်​ထဲက တစ်​​ယောက်​က ဆွမ်းင်္ကြီးခံ တစ်​ခုကို ကန်​ထရိုက်​ ဆွဲထားတဲ့ ကန်​ထရိုက်​တာကြီးဗျ ။ သူ့သားက အဲ့ဆွမ်းကြီးခံ တီးဝိုင်းမှာ ဒရမ်​မာ ။ ​နောက်​တစ်​​ယောက်​က အဲ့ဆွမ်းကြီးခံ တီးဝိုင်းလှည်းတွန်းတယ်​ဗျာ ။ ​ကောင်​​လေးက လည်း အဲ့တီးဝိုင်းမှာ ဂစ်​တာတီးတယ်​ ။ ​ကောင်​မ​လေးက သီချင်းဆိုတယ်​ ။ ဟိုဒရမ်​ တီးတဲ့​ကောင်​​လေးနဲ့ ဘာလိုလို သတင်းထွက်​​နေတယ်​ ။ အဲ့ ​တွေ့လိုက်​ရင်​​တော့ ​ကောင်​​လေး အ​ဖေနဲ့ချည့်​​တွေ့​တွေ့​နေတယ်​ ။ ကဲ ဘာသိချင်​​သေးလဲ ”
​နေ၀န်းနီ ကို ​ပြောင်​စပ်​စပ်​ လုပ်​ပြီး အ​ဖြေ​ပေး​နေတဲ့ ​မောင်​ချက်​ကြီးကို ​ဒေါသ နဲနဲဖြစ်​လာတယ်​ ။ သူ​ပေးတဲ့ အ​ဖြေက ကိုထွန်းအံ့ တို့ မိသားစု ဘာ​ကြောင့်​ စီးပွား​ရေး အဆင်​​ပြေလာသလဲ မပါဘူး ။ စိတ်​​ပေါက်​​ပေါက်​နဲ့ ​ရှေ့က ဘီယာခွက်​အကုန်​​မော့ချလိုက်​တယ်​ ။ အဲ့ ဒိအချိန်​မှာပဲ ဂျင်းနံ့ ငရုပ်​​ကောင်းနံ့ တစ်​​ထောင်း​ထောင်းနဲ့ ငါးကင်​​ရောက်​လာတယ်​ ။ ငါးက ဇလားဗီယားလို့ ​ခေါ်တဲ့ငါးပါ ။ အဲ့ ငါးက ​နေ၀န်းနီ တို့ ဆီမှာ​ပေါပါတယ်​ ။ မြို့ အ​နောက်​ဖက်​ ၁၅ မိုင်​​လောက်​အကွာမှာရှိတဲ့ ဆင်​​သေ ဆည်​က ထွက်​တာပါ ။ အနီးတစ်​၀ိုက်​က ရွာ​တွေမှာ တစ်​ပိဿာ မှ တစ်​​ထောင်​​လောက်​ပဲရှိတာ ။ မြို့​ပေါ်မှာ​တော့ နှစ်​​ထောင်​​လောက်​ရှိမယ်​နဲ့တူရဲ့ ။ ဆိုင်​ရှင်​က ကုန်​သွားတဲ့ ဘီယာခွက်​ ​မြှောက်​ပြလိုက်​ပြီး
” ​နေပါ​ဦး ​မောင်​ချက်​ကြီးရဲ့ ငါ​မေးတာနဲ့ မင်း​ဖြေတာက ဘယ်​လိုမှ ဆက်​စပ်​လို့ မရပါလား ”
​မောင်​ချက်​ကြီးက သူ့ဘီယာခွက်​ကို လက်​နဲ့ လှည့်​ပတ်​​နေရင်း
” ​အော်​ ဦး​နေ ဦး​နေ နှစ်​ဆယ်​ရာစုက အ​တွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ ကို နှစ်​ဆယ့်​ တစ်​ ရာစုထိသယ်​လာပြီး ​တွေး​ခေါ်​နေတုန်းကိုး အဲ့ အ​တွေ့အကြုံ​တွေ ဗဟုသုတ ​တွေ ချထားခဲ့​တော့ ၂၁ ရာစု မှာလုံးဝ​ပြောင်းလဲ ကုန်​ပြီ ။ သုံးမရ​တော့ဘူး ။ သယ်​လာချင်​​သေးရင်​​တော့ ​နောင်​လာ​နောက်​သား​တွေ ကြားဖူးတယ်​ရှိ​အောင်​ ရယ်​စရာ ​မောစရာ အဖြစ်​​ပြောဖို့ ချန်​ထားဗျ ”
သူက ​ပြောပြီး ဘီယာခွက်​ကို ​မော့ ​သောက်​လိုက်​တယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီ လည်း ကိုထွန်းအံ့ တို့မ်​သားစု အတွက်​စိတ်​ပူသွားတယ်​ ။ ဒီလူကြီးဘာ​တွေ​လျှောက်​လုပ်​​နေပြီလဲ​ပေါ့ ။
” ဒီလိုဗျ ဦးနီ စိတ်​ရှည်​ရှည်​ထားပြီး နား​ထောင်​ ခင်​ဗျားမသိ​သေးတဲ့ အ​ကြောင်း ကျုပ်​​ပြောပြဦးမယ်​ အဲ့ အ​ကြောင်း ​ပြောပြီးမှ ဦးနီ လိပ်​ပတ်​လည်​သွားမှာ ”
​ဟုတ်​​တော့လည်း ဟုတ်​တယ်​ ။ ​မောင်​ချက်​ကြီး က ​နေရာ အနှံ့ သွား​နေပြီး အလုပ်​စုံ လုပ်​​နေတာဆို​တော့ ​နေ၀န်းနီ မသိ​သေးတာ သူသိတာ ဖြစ်​နိုင်​တာ​ပေါ့ ။
” ကျုပ်​တို့ တပ်​ကုန်းမြို့ ​မြောက်​စ က ‘ မိုး​ကောင်း ‘ ဘုရားကြီး ဆွမ်းကြီးခံ အလှည့်​​ကောင်းတာနဲ့ ​ကြွေးတင်​သွားတာသိလားဗျ ”
ဟိုက်​ ရှာလပတ်​ရည်​ ။ ဘုရား​တောင်​​ကြွေးတင်​တယ်​ ဆိုပါ​ရောလား ။ ဆွမ်းကြီးခံလှည့်​တဲ့ ​ကောင်​​တွေ ဒါ​တော့ လွန်​တာ​ပေါ့ ။
” ဟာသ ​ပြော​နေတာမဟုတ်​ဘူး တစ်​ကယ်​ကို ​ကြွေးတင်​လို့ မီးသတ်​နဲ့ ရဲ နဲ့ ​ပေါင်းပြီး အဲ့ ဘုရား​ရှေ့က ဖြတ်​သွားတဲ့ ကား တစ်​စီး နှစ်​ရာ ​တောင်းပြီး ​ကြွေးဆပ်​ လိုက်​ရတာ ။ ကျုပ်​အိမ်​​ဘေးက လူက အရံမီးသတ်​ထဲမှာ ပါတယ်​ ။ သူတို့က်ို အလှည့်​ကျ ထိုင်​ရတာ ။ အဲ့ ဒါ ဆွမ်းကြီးခံ က​ပေးတဲ့ ဒုက္ခပဲ ”
အဲ့သလို​ပြောပြီး ဘီယာ ထပ်​မှာပါတယ်​ ။ ပြီး​တော့ ​ပြော​သေးတယ်​ ။
” ရင်​ပူ​နေရင်​ဘီယာ​သောက်​” တဲ့ ​နေ၀န်းနီ လည်း မရှင်းတာနဲ့
” ​နေပါဦး ​မောင်​ချက်​ကြီးရဲ့ အလှူခံ ရတဲ့ ပိုက်​ဆံ ​တွေ က ဘယ်​​ရောက်​ကုန်​လို့လဲ ဘုရားကြီးက ​ကြွေးတင်​ရ​အောင်​ ”
” အဲ့ ဒါ​ပြောတာ​ပေါ့ ၂၀ ရာစုက အ​တွေ့အကြုံ ဗဟု သုတ​တွေ ထားခဲ့ လို့ ။ အလှူခံ ​နောက်​လိုက်​တဲ့ လူ​တွေက ​နေ့စားသမား​တွေဗျ ။ သူ့​ကြေးနဲ့ သူရှိတယ်​ ။ အလှူခံလို့ရသည်​ဖြစ်​​စေ မရသည်​ဖြစ်​​စေ ​နေ့စားခ အပြည့်​ရှင်းရတယ်​ ။ အဲ့ဒိ​တော့ ဘုရားကြီး ​ကြွေးတင်​​ရော​ပေါ့ဗျ ”
​မောင်​ချက်​ကြီးက ​ပြောမှ ​ရေး​ရေး​ပေါ်လာ​တော့တယ်​ ။
” အဲ့ဒါ​ကြောင့်​ ​နောက်​ပိုင်း အလှူခံ ကို ကန်​ထရိုက်​ပဲ ​ပေး​တော့တယ်​ ။ တစ်​​နေ့ ​လေးငါး​ထောင်​ ရှိတယ်​ ။ ဘုရား ဒါမှ မဟုတ်​ ​ကျောင်းက အလှူ ထွက်​ခံတယ်​ ဆိုတဲ့သက်​​သေခံ ခွင့်​ပြု စာရွက်​​လေးပဲ ကန်​ထရိုက်​လက်​ထဲ​ပေးလိုက်​ တစ်​လကို တစ်​သိန်းခွဲလှူ ခဲ့ ။ ကျန်​တာ အဲ့ ဘုရား အဲ့ ​ကျောင်းနဲ့ မဆိုင်​ ။ ရှင်းပြီလား ”
အဲ့ဒီလို​ပြောပြီး​မောင်​ချက်​ကြီး တစ်​​ယောက်​ ဘီယာ​သောက်​လိုက်​ အမြည်းစားလိုက်​ ။ ​ဆေးလိပ်​မီးထညှိလိုက်​နဲ့ အလုပ်​ရှုပ်​​နေတယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီ လည်း ဥုံးစားတာနဲ့ ဘီယာ တစ်​စုပ်​စုပ်​ရင်း နဲနဲ စပ်​စု ကြည့်​ပြီး​တော့ သူတို့ ကုန်​ကျစရိတ်​ကို ရှင်း​အောင်​ သီးသန့်​ချပြပါမယ်​ ။ ​မောင်​ချက်​ကြီး အ​ပြောအရတွက်​ပြတာပါ ။ သူမသိလိုက်​တာ​တွေ ရှိချင်​ ရှိဦးမယ်​လို့ ဆိုပါတယ်​ ။ အလှူခံ ထွက်​ပြီ ဆိုရင်​ မပါမဖြစ်​ ပါရတာက အသံချဲ့စက်​ပါ ။ ​အောက်​ပါအတိုင်းအကြမ်းဖျင်းတွက်​ကြည့်​ရ​အောင်​
၁။။အသံချဲ့ စက်​ ၁၅၀၀၀/
၂။ အသံချဲ့ စက်​ ခွင့်​ပြုမိန့်​ ၁၅၀၀၀/ (တစ်​လစာ )
၃။ တီးဝိုင်းငှားခ ၁၅၀၀၀/
၄။ အတီးသမား တစ်​​ယောက်​ ၅၀၀၀× ၃/၅ ( သ​ဘောက သုံး​ယောက်​ပါတဲ့ ၀ိုင်း ရှိသလို ငါး​ယောက်​ပါတဲ့ ၀ိုင်းလဲ ရှိပါသတဲ့ )
၅။ သီချင်​ဆို တစ်​​ယောက်​ ၃၀၀၀/ အဲ့တာလည်း သုံး​ယောက်​က​နေ ငါး​ယောက်​ထိ ပါပါတယ်​
၆။ လှည်းငှားခ ၁၅၀၀၀/
( ​ထွေလာဂျီ တို့ သုံးဘီး တို့ငှားလည်း အဲ့​လောက်​​ပေးရပါသတဲ့ )
၆။ လှည်းတွန်း တစ်​​ယောက်​ ၃၀၀၀/
တ်ီးဝိုင်းတင်​ထားတဲ့ လှည်း​ပေါ်မူတည်​ပြီး လူ အနဲ အများ ရှိနိုင်​ပါတယ်​ ။
၇။ အလှူခံ လိုက်​မယ့်​သူ တစာ​ယောက်​ ၁၅၀၀ က​နေ ၃၀၀၀ ထိ ​ပေး​ခေါ်ရပါတယ်​ ။
၈။ လိုက်​ပါမည့်​သူ အားလုံးတွက်​ လက်​ဖက်​ရည်​ မုန့်​ ​ဆေးလိပ်​ ကွမ်း ​နေ့လည်​စာ ထမင်း ကံထရိုက်​ က ကျခံ ရပါတယ်​ ။ အဲ့ဒိ​တော့ တစ်​​နေ့တာ ကုန်​ကျ စရိတ်​က တစ်​​နေ့ တစ်​သိန်းအထက်​မှာ ရှိပါတယ်​ ။ ဒါ​ကြောင့်​ပဲ ထင်​ရဲ့ သူတို့ အလှူခံ​တွေက မနက်​ ​ခြောက်​နာရီ ​လောက်​က​နေထွက်​လာတာ တစ်​ခါတစ်​​လေ ည ကိုးနာရီ ဆယ်​နာရီအထိ မသ်ိမ်းနိုင်​​သေးတာ ခုမှ သတိရတယ်​ ။ ​ပြော​တော့ ဘာသာ​ရေးလုပ်​တော့ အလှူခံရ​ငွေထဲက ​နေ့စားခ ယူ​နေတာ ဆို​တော့ ​မောင်​ချက်​ကြီးရဲ့ ​ပြောစကား​လေးက မှတ်​သား​လောက်​ပါရဲ့ ။
” ဒီမှာ ဦး​နေ၀န်းနီ ရဲ့ အဲ့ဒိလို ဘာလို့လုပ်​​နေရလဲ ။ ကျန်​တဲ့ အလုပ်​​တွေမှာ အဲ့​လောက်​​နေ့တွက်​မစီလို့ဗျ ။ ပြီး​တော့ ဒီ​လောက်​လည်း သက်​​တောင့်​ သက်​သာနဲ့ မရဘူး ။ တီးတဲ့ သူနဲ့ ဆိုတဲ့ သူက လွဲရင်​ ကျန်​တဲ့ သူက ဘာမှ တတ်​စရာမလိုဘူး ။ ​နောက်​ဆုံးဗျာ အလုပ်​ရှင်​က ​စောင့်​ကြည့်​ပီး မာန်​မဲ​နေတာမခံရဘူး ။ ကျန်​တဲ့ အလုပ်​ ၀င်​လုပ်​ရ​အောင်​ ဘာအလုပ်​ရှိလည်း ။ ခုနှစ်​တန်းရှစ်​တန်း​လောက်​ပဲ စာတတ်​တယ်​ဗျာ ။ လွယ်​လွယ်​ကူကူ ၀င်​လုပ်​ နိုင်​တာ ​ဈေးဆိုင်​​တွေမှာ ။ ဒါ​တောင်​ ခု​နောက်​ပိုင်း အာမခံ တဲ့သူရှိမှ ဖြစ်​လာပြီ ။ လုပ်​ချင်​တဲ့ သူတိုင်း လက်​မခံ​တော့ဘူး ။ လုပ်​ချင်​သ​လောက်​လည်း အလုပ်​မ​ပေးနိုင်​ဘူး ။ ဆိုင်​တိုင်း တစ်​​ယောက်​ထွက်​မယ်​ဆို ​နောက်​က တန်းစီ​နေတဲ့သူ​တွေ ရှိပြီးသား ။ အဲ့​နောက်​ ပန်းရံ လက်​သမား အပင်းပန်းခံနိုင်​ပြီး အကြမ်းဗတမ်း လုပ်​နိုင်​မှ ​ခေါ်တာ ။ ​နောက်​ အရင်းအနှီး မရှိဘဲ ​နေ့စားဝင်​လုပ်​လို့ ရတာ​ပြောပါဦး ။ ဘာမှမရှိဘူး ။ စက်​ရုံ အလုပ်​ရုံ ကျုပ်​တို့မြို့မှာနိုး ။ ဆီစက်​ လား စားအုန်းဆီ ၀င်​လာကတည်းက နားထားရတာ ။ ဆန်​စက်​ လုပ်​သားဘယ်​နှစ်​​ယောက်​အလုပ်​​ပေးနိုင်​လို့လဲ ။။အဲ့ဒိလို​ပေးနိုင်​တဲ့ ဆန်​စက်​လည်းမရှိပါဘူး ။ ပွဲရုံ​တွေ​ကော တရုပ်​က ကိုယ်​စားလှယ်​​တွေ ရွာ​တွေထိဆင်းဝယ်​​နေလို့ ရပ်​ထားရတာ ကြာပါပ​ကောလား ။ ကျ​နော်​တို့နိုင်​ငံက ကုန်​ပစ္စည်း ထုတ်​တဲ့ နိုင်​ငံ မဟုတ်​ဘူး ။ သူများ လုပ်​ပြီးသားပဲ အသင့်​ ၀ယ်​သုံးတဲ့ နိုင်​ငံ ။ ​အောက်​​ခြေ လူတန်းစား အတွက်​ အလုပ်​ အဆင့်​သင့်​​ပေးနိုင်​တဲ့ ​ပေးစရာ ရှိတဲ့ နိုင်​ငံမဟုတ်​ဘူး ။ ပိုက်​ဆံ ချမ်းသာတဲ့ သူကလည်း သူလိုအပ်​တဲ့ အလုပ်​သမား အတိုင်းတာထက်​ပိုပြီး အလုပ်​​ပေးမထားနိုင်​ဘူး ။ ဖန်​တီးမ​ပေးဘူး ။ ဒီ​တော့ ထမင်း မငတ်​ဖို့ ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ သိပ်​စဉ်းစား​နေမှာ မဟုတ်​ဘူး
။ ဒါ​တောင်​ ဘာသာ​ရေး ခုတုံး လုပ်​ရဲတဲ့ အလှူခံ ကန်​ထရိုက်​​တွေ ရှိ​နေလို့ ။ နို့မို့ ဆို အဲ့အလှူခံ​တွေ မှာပါတဲ့ သူ​တွေ ဘာလုပ်​​နေမလဲ ။ ​ဈေးထဲမှာ အလစ်​သုတ်​ချင်​ သုတ်​မယ်​ ။ ည သူများအိမ်​တက်​ချင်​တက်​မယ်​ ။ ဆာလာအိတ်​ တစ်​လုံးလွယ်​ပြီး တစ်​လမ်းဝင်​ တစ်​လမ်းထွက်​ ပြန်​​ရောင်းလို့ ရတဲ့ ပစ္စည်း လိုက်​​ရောက်​မယ်​ ။ အဲ့နဲနဲ လူရည်​လည်​ရင်​ နှစ်​လုံး သုံးလုံး ​ကော်​မရှင်​နဲ့​ရောင်းမယ်​ ။ ဒီလိုမှ မလုပ်​ချင်​ရင်​” မ​လေး” ထွက်​ ” ထိုင်း” ထွက်​ ။ မြို့ကြီး​တွေမှာလဲ ​ရောက်​​နေပြီးသားလူ​တောင်​ အလုပ်​မ​ပေးနိုင်​ဘူး ။ ခု​နောက်​ပိုင်း အလုပ်​​တွေ ​ပေါလာသလိုရှိ​ပေမဲ့ အဆက်​အသွယ်​မရှိရင်​ လိုက်​ရှာမ​နေနဲ့ ။ ဒါ ကျုပ်​တို့မြို့​လေးရဲ့ စီးပွား​ရေး ​ဈေးကွက်​ပဲ ။ ”
​မောင်​ချက်​ကြီးရဲ့ ​နေ၀န်းနီ တစ်​​ယောက်​ မူးသွားပါ​တော့တယ်​ ။ သူ​ပြော​တော့လည်း ဟုတ်​​နေတာပဲ​လေ ။ မ​တွေ့တာကြာတဲ့ ကိုထွန်းအံ့ ဆီလည်း “အလွမ်း​ပြေ စကား သွားမ​ပြောဖြစ်​လိုက်​​တော့ပါ ” ကိုထွန်းအံ့ ဆီက ထွက်​လာမဲ့ စကား​တွေကို နား​ထောင်​ဖို့ အားယူရပါဦးမယ်​ ။
2015 MAR6FRI
လူတွေဟာ. ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမရှိတဲ့..အလုပ်မှာ.. ရင်းနှီးမြုတ်နှံ.. အလုပ်အကိုင်လည်ပါတ်နေစေမှတော့.. အဖနိုင်ငံခမျာ.. သနားစရာပေါ့…။ သယံဇာတထုတ်ယူရောင်းနဲ့.. မွဲပြီးရင်း…မွဲ..။
ဘိုးဘွားတွေထားခဲ့တဲ့အမွေ(သယံဇာတ)တွေ… ရောင်းချထုခွဲ..။ နောင်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်မချန်ပဲ.. အကျိုးမရှိတာတွေနဲ့ ဖြုန်းတီးသုံးစွဲကြ..။
ငါ့ရှေ့ဘ၀ကမလှူခဲ့လို့.. အခုလိုဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီး.. ငါသေရင်နိဗ္ဗာန်၊ နတ်ပြည်သွားမယ်ဆိုတဲ့.. ငါ့အတ္တအတွက်ပဲ.. လုပ်ကြ..။
အင်္ဂလိပ်ဝင် ကျွန်ပြုတော့.. ဗမာတွေအလုပ်မှမလုပ်ချင်သမို့.. အိန္ဒိယက.. ကုသလမျိုးတွေ ဗမာပြည်ထဲသွင်းအလုပ်လုပ်စေရတယ်..။
အဲဒီအခါကများ.. ရန်ကုန်ဆိုတာ.. ကုလားချည်း..။
ကျေးလက်တွေကျတော့လည်း.. ချစ်တီးတွေကငွေချေး.. ဗမာတွေက.. ငွေယူ.. စေတီ..ဘုန်းကြီးကျောင်းတည်နဲ့..
ဗမာထေရာဝါဒ.. နတ်ကိုးကွယ်မှုမှာ.. ဟိန္ဒူအယူတွေရောသမမွှေ.. ။
အယူဝါဒ….. ပိုဆိုးတဲ့.. ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တိုင်းပြည်ဖြစ်လာသပေါ့…။
အခုထိလည်းမပြင်.. ပြင်ဖို့လည်း.. တွေးမိပုံမရ..
ဗကပကို.. အာဏာအပ်ပြီး.. ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးလုပ်ပြီးမှပဲ.. မျှော်လင့်ချက်ရေးရေးပေါ်မယ့်ပုံရတယ်..။
ဖယ်ဒရယ်စစ်တပ်ဆိုလည်း.. တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းချဖို့ကလွဲပြီး.. တခြားဘယ်မှမချရဲ..
တကယ်စွမ်းရင်.. အခုပွဲကြမ်းနေတဲ့.. အိုင်းစစ်ကို . အခကြေးငွေယူပြီး တိုက်ပေးမယ်လို့ကြေငြာပါလား..
ဒါမှမဟုတ်.. အိုင်းစစ်ဘက်ကနေ.. မဟာမိတ်တပ်တွေကိုတိုက်ပေးမယ်..။ စစ်သားတယောက်တလ ဒေါ်လာ၅ထောင်လို့လစာပေးလို့. တောင်းပါလား..။
ဥာဏ်ရှေ့ပန်း၍ တ၀မ်းတစိတ် ညီစေသတည်း။
ဆရာအောင်သင်းလက်ရာ “ဘုရားက နှစ်ကျပ်ခွဲ အကြွေးတင်” ဆိုတာလေး သတိရ…
♫♪♫အလွမ်း​ပြေ စကား တောင်မ​ပြောလိုက်ရဘူးကွယ်♪♫♪ပန်းတွေကြားက ပန်းမမချော♫♪♫
.စာဖတ်နေတုန်း…အိမ်ရှေ့ကလော်ကြီးနဲ့ အလှူ ခံလာနေသဗျို့
အရင်က အဖိုး အိမ်ရှေ့က အိမ်က လူမိုက်တစ်ယောက်ရှိတယ်။
အဲဒီတုန်းက ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဆိုက်ကားနင်းတယ်။
၂၀၀၇ မတိုင်ခင် ကျနော် စလုံး မထွက်ခင်လောက်မှာမြင်မိတော့ ယူနီဖောင်းကြီးနဲ့ နံပတ်တုတ်ကြီးနဲ့ စွမ်းအားရှင် ဆိုပဲ။
ခု ဒီ တစ်ခေါက်ပြန်တော့ ရောင်းပြီး သား အိမ်ကို သွားကြည့်ရင်း အဲလူ မမြင်လို့ မေးမိတော့ ဘုန်းကြီး ဝတ် သွားပြီတဲ့။
ရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံက အလှုခံမိန်းမကြီးက ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့လို့ အစချီပြီး အလှုခံသဗျ ၊
တခြား ဘာအလုပ်မှလည်း မရှိ ၊
ဘုရားကျွေးတာ စားနေတာ လို့ဆိုသေး ၊
အလှုခံ ရငွေ ၂၀ % က သူ့အတွက်ဆိုပဲ ၊
အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွလို့ ဆိုရိုးရှိထားပေသေးတာကိုးဗျ
သဂျား က ဆိုရှယ်​လစ်​ ​လေသံ မ​ပျောက်​​သေးဘဲဂိုး
.နေပြည်တော် မြို့လည်နဲ့ မြို့ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်က အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့
(ယာဉ်လိုင်း/ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ/မုန့်ဆိုင်/ကုန်စုံဆိုင်/ကွမ်းယာဆိုင်ကအစ…ဘုရားပေါ်တက်ရင် ကြုံရတဲ့ ဖိနပ်အပ်လက်ခံဌာနအဆုံး ) ကိုတော့ ကျနော်က ချဉ်တယ်ဗျ ။